युगपत्रमातृभाषाको महलमा संस्कृत किन ? - युगपत्र
सरकारले खटाएका तथ्यांक संकलकहरु अब हाम्रो घरघर आउँदै छन् । यस अवसरमा घर–परिवारका सदस्यहरू मध्ये कमसेकम एकजनाले मातृभाषाको महलमा “संस्कृत” भन्ने उल्लेख गरौँ । यसका लागि तपाईंले संस्कृत जान्नुपर्छ भन्ने छैन । यदि तपाईं नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, नेपालभाषा बोल्नुहुन्छ भने तपाईँले ५० देखि ७०% हामीले संस्कृत जानेका हुन्छौँ । तपाईँले संस्कृत भाषाको महलमा “ठीक” भन्नुमा कुनै जालझेल हुँदैन ।
नेपाली, मैथिली, भाजपुरी, नेपालभाषा लगायतका अन्य धेरै भाषाहरुको पनि मातृभाषा संस्कृत हो । संस्कृतको सुरक्षा भए नेपाली, भोजपुरी, थारू, मैथिली, नेवाआदि भाषाको सुरक्षा हुन्छ । यदि तपाईँको परिवारले न्वारन, ब्रतवन्ध, विवाह, मृत्युआदि संस्कार र नेपालका मौलिक चाडपर्वमा विश्वास छ र तपाईंलाई हिन्दू, बौद्ध, जैन वा नेपालका रैथाने धर्म, संस्कृति तथा परम्पराको माया लाग्छ भने संस्कृत भाषाको सुरक्षाको लागि आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस् ।
तपाईँको परिवार ५ जना सदस्य हुनुहुन्छ भने जनगणनामा आउने गणकलाई आफ्नो परिवारबाट कमसेकम एकजनाको मातृभाषा “संस्कृत” हो भनेर उल्लेख गर्नुहोला । नेपालका सबै भाषाहरू राष्ट्रिय भाषा हुन् र संस्कृत प्राय भाषाको माउ भाषा हो । संस्कृत बलियो भयो भने सबै भाषा बलिया हुन्छन् । अहिले जग नै कमजोर बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ ।
हामी सबै नेपालीले संस्कृत भाषालाई माया गर्नुपर्छ किनभने संस्कृत भाषाले हाम्रो पहिचान दिएको छ । हाम्रो नाम, ठाउँ, कर्ममा अन्य रैथाने भाषाहरुको साथसाथै संस्कृत भाषाको पनि अत्यधिक प्रभाव छ । कुनै पनि नेपालीले चाहेर पनि संस्कृत छोड्न सक्दैन र मिल्दैन पनि । जुनसुकै भाषा बोले पनि जुनसुकै भूभागमा बसे पनि संस्कृतको संस्कार हामीसँगै रहन्छ । रमाइलो कुरा त के छ भने संस्कृत भाषाको विरोध गर्न र संस्कृतका संस्कारहरूको विरोध गर्न पनि संस्कृत भाषानै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बरू, हामीले संस्कृत भाषालाई माया गरौँ, संस्कृतले हामीलाई माया गरिनै रहने छ ।
नेपालमा १२३ भाषाहरू छन्, ती मध्ये १०० जना भन्दा कमले बोल्ने भाषाहरूको सङ्ख्या ११ वटा जति छन् । यी भाषाहरुको संरक्षण गर्न सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्छ । बहुसंख्यकले बोल्ने भाषाहरूमा पनि आफ्नो मातृभाषा बोल्ने र सिक्ने तर्फ सरकारकै तर्फबाट प्रेरणा दिने पहल हुनु अनिवार्य छ । संस्कृतको विरोध गरेर लोपोन्मुख भाषाको रक्षा हुँदैन । भाषा र संस्कृतिको नाममा भाषा र संस्कृतिलाई आर्यघाट पुर्र्याउन षड्यन्त्र गरिरहेका घृणावादीहरूलाई चिनौँ ।
नेपाली भाषा बोल्नेहरू ४७% छन् । मैथिली, भोजपुरी, तामांग, गुरुङ. मगर, राई–लिम्बु भाषाहरू बोल्नेहरू पनि प्रसस्त छन् र यी सबै भाषाहरूमा संस्कृतको राईछाई छ । संस्कृत भाषाका विरोध गर्ने नाममा कुनै खास समुदायप्रति घृणा फैलाएर आफ्नो “दूनो” सोझो गर्नेहरूको मनसाय बुझौँ । संस्कृत भाषाको अभावमा बौद्ध धर्म प्राण रहित हुन्छ, जैन धर्मको पहिचान मेटिन्छ । त्यसैले नेपालका रैथाने पद्धतिहरूको रक्षा र निरन्तरताका लागि पनि संस्कृत चाहिन्छ नै ।
संस्कृत भाषा जान्नै पर्ने, बुझ्नै पर्ने बोल्नै पर्ने हुँदैन । फर्केर हेर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ कि संस्कृत भाषाले हाम्रो जीवनमा कति स्थान ओगटेको छ ? हामी मध्ये कसैको मातृभाषा नेपाली होला, कसैको मैथिली होला वा अन्य होला । तर संस्कृतलाई हटाएर नेपाली लगायतका अन्य मातृभाषाहरुको सुरक्षा हुन्छ भन्ने भ्रमबाट सरोकारवाला सबै मुक्त हुनुपर्छ ।